Ọ bụ obere ihe ndị na - eme ka ahụmịhe onye ọrụ gị ka mma! | Martech Zone
Taa bụ ụbọchị mbụ m na ọkwa m ọhụụ dịka Director of Technology maka otu ụlọ ọrụ na-eto eto Marketing na eCommerce ebe a na Indianapolis, a na-akpọ Okporo ụzọ. Ka m tụlere ngwanrọ anyị taa ma nyere aka na ntinye ọhụrụ, ọkaibe nke ngwa a gbara m ume. Ngwa anyị na-etinye usoro ịntanetị na ọtụtụ naa na usoro.
Ana m atụ anya iso ndị otu anyị na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ iji weta Ntuziaka Onye Ọrụ anyị n'ụzọ zuru ezu iji hazie CSS na, ikekwe, ụfọdụ AJAX. Ozi buru ibu bụ na ihe ndị a bụ mgbanwe ịchọ mma nke agaghị achọ ịgha ma wughachi ngwa ahụ. N'ụzọ dị ukwuu, ekwenyere m na enwere ike ịmezi ngwa ahụ n'ụzọ abụọ, nke mbụ bụ ikike ịhazi mmekọrịta onye ahịa yana nke abụọ bụ iji mejuputa ụfọdụ 'obere ihe'.
Ka m na-arụ ọrụ na Paypal n’abalị ụnyaahụ, achọtara m ‘obere ihe’. Mgbe ị na-ejikọ njikọ ụfọdụ na ntanetị Paypal, ihe ngosi dị mma na-apụta ma na-apụ apụ mgbe ị na-apụ na ya. Nke a bụ nseta ihuenyo:
Ọ bụ ntakịrị ụda olu dị ka nke a na sọftụwia na - eme ka ọ bụrụ ọrụ njirimara ka mma. Ikekwe ihe na-adọrọ mmasị karị bụ na ndị mmepe na Paypal echebughị 'ịmalitegharị wiil ahụ', ha chọtara ezigbo ọbá akwụkwọ ma tinye ya n'ọrụ.
Aga m achọ usoro ndị a na usoro ndị ọzọ na ọnwa na-abịanụ iji melite ahụmịhe onye ọrụ nke ngwa anyị.
Lọ akụ na-akwado okpomoku zuru ụwa ọnụ
WOW, Amaghị m na Yahoo si UI n'ọbá akwụkwọ bụ ihe mepere emepe na Sourceforge… nke ahụ bụ ihe egwuregwu ọhụrụ ọhụụ m ga-egwuri egwu. 🙂
Ihe m chere bụ ahụmịhe mgbakwunye nke onye ọrụ dị mma n'oge na-adịbeghị anya bụ mgbe m gbanwere Yahoo Webmail Beta ọhụrụ ma mesoo ya ezigbo nkuzi nkuzi na-adị mma nke na-eji ngwa ọrụ ejiri ihe ọ bụla metụtara ya.
Amaghị m ma ọ bụrụ na koodu a bụ akụkụ nke YUI Library, mana ọ bụrụ na ọ bụ, ọ nwere ike ịbụ ihe mara mma ịgbakwunye maka ngwa ecommerce gị.
Aug 8, 2007 na 7:12 PM
Yahoo nwere nnukwu nchịkọta UI components, Nick. Gbalia lelee njikwa grid ha. Nanị ịtụnanya. Na n'ịgụ akwụkwọ ha na nkwekọrịta ikike - ha niile dị maka ịnara ọ bụrụhaala na ịchọghị nkwado.
Adịghị m onye ọka iwu, ọ bụ ezie na… nwere ike ịchọrọ ịlele abụọ!